Birdwing Apartment kwiEdge Hill
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJudi & Wayne
Le ndlu inomlinganiswa omangalisayo ngelixa ibonelela ngobunewunewu bendawo yokuhlala yetropiki enesisa esinegumbi lokulala likakumkanikazi elijonge kwigumbi lokuhlambela kunye nomngangatho. Amaziko okuhlambela abucala kunye negumbi lokuhlala elibanzi. Ikhitshi langaphandle elitshisayo.
UWayne kunye noJudi bahlala kwigumbi eliphezulu kwisitayile sangoku saseQueenslander kwaye iindwendwe zethu zinenqanaba elisezantsi kubo.
Indawo yethu yokuhlala i-Birdwing ikuvumela ukuba uphumle kwaye ukonwabele ukujikeleza okuzolileyo komdibaniso wethu okhethekileyo wembono yamahlathi kunye nokuhonjiswa kwangoku. Inemvakalelo epholileyo yasekhaya, ifanelekile ukuba ube namava kwaye ukonwabele imozulu eshushu yaseFar North Queensland.
Ngelishwa asizivumeli izilwanyana zasekhaya zayo nayiphi na inkcazo kwi-BnB yethu.
4.95 ·Izimvo eziyi-417
4.95 · Izimvo eziyi-417
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi417
I-Edge Hill kudala yaziwa njengenkulumbuso yedolophu yaseCairns. Sijikelezwe luluhlu oluhle lweWhitfield, iiGadi zeBotanic, iCentenary Lakes, iRed & Blue Arrow iingoma zokuhamba, kunye neTanks Art Centre. Ngokuhlala apha uzivumela ukuba ufane nomfanekiso weetropiki ezintle. Ukuhamba ngokulula ukuya kwi-Edge Hill "Hub" apho uya kufumana ezinye zezona Cafe's zibalaseleyo, iindawo zokutyela, kunye neevenkile zefashoni nokunye.
Umbuki zindwendwe ngu- Judi & Wayne
Sithanda apho sihlala khona, kwaye sihlala sikulungele ukunika naliphi na icebiso okanye ukuphendula nayiphi na imibuzo ukwenza ukuhlala kwakho kube yinto ekhumbulekayo.
UJudi & Wayne yi-Superhost